Nhau - Lianteng inodzidzisa tsika yemakambani yevashandi
Kubva pakagadzwa makore anopfuura gumi apfuura, Lianteng kurongedza michini haina kungo tarisa pane kuvandudza uye kugadzirwa kwakasiyana kupakira michina, asi zvakare yakateedzera kutarisisa kunzwisisana kwemakambani tsika yevashandi.
Lianteng agara achisimbirira kuti vanhu-vanotungamira ndicho chinhu chekutanga mukugadzirwa, iro risiri iro chete iro bhizimusi guru rebhizimusi, asiwo musimboti webhizimusi manejimendi.Lianteng michina chikoro chinobva kune tarenda pfungwa ye "kuvaka mafekitori uye kudzidzisa vanhu kutanga ". Ichowo chirevo chetsika che" imba "inodziya, inoisa vanhu munzvimbo yekutanga manejimendi manejimendi. Ichitarisana nepfungwa yekushandira vashandi nemoyo wese, kambani inoita basa rekuvaka tsika, ichiedza kugadzira tsika yemamiriro izere nehutano hwemukati, kubatana kwakasimba, uye kukunda kuvimba kwevatengi nerutsigiro kunze.
Panguva imwecheteyo, Lianteng inosimbisa hushoma hwekuvaka kwakamisikidzwa kwekambani yedu.Standard ndiwo "mutemo" webhizinesi, zviitiko zvese zvebhizimusi zvinofanirwa kuitwa mukati mehurongwa hweyakajairwa, "standard yekutanga, maneja mukuru wechipiri zvakajairwa munhu wese asati aenzana ", uyu ndiwo muyero unowirirana wekuvaka lianteng kuomesa. Sachigaro anofunga. Kutsiva" kutonga nemunhu "ne" mutemo nemutemo "kunogona kukunda kuda kwemunhu uye nemanzwiro. Kufunga kutsauka uye kuongorora kukanganisa kunokonzera kuchinjika kwebhizinesi. kusimudzira Yakagadzwa seti yesainzi uye inonzwisisika zviyero zvekutungamira bhizinesi, kuenzanisa maitiro evashandi.Izvi zvinoita kuti ive nechokwadi chekureba-uye kugadzikana kusimudzira kwebhizinesi.
Iyo yekupedzisira poindi yemubatanidzwa tsika kuvandudza bhizinesi nehunhu. Lianteng inobvuma kuti mhando ndihwo hupenyu hwebhizinesi uye chigadzirwa chinomiririra hunhu.Vanhu havafungi nezvekuti vangakunda sei uye kukurira avo vanopikisa. "Vanhu vanodavira kuti mune zvemusika hupfumi, vakwikwidzi vacharamba varipo, manejimendi akanaka chete, kugadzirisa zvigadzirwa zvemhando yezvigadzirwa ndiyo kiyi yekutonga pamusika. Kambani yeLianteng inotevedzera mutemo wezve" kupa zvinhu zvepamusoro kune iyo nzanga ", inovavarira kupona nemhando yepamusoro, inovavarira kuvandudzwa nemukurumbira, uye inogara ichiwedzera kudyara mukushandurwa kwetekinoroji uye kutsva kwekugadzirwa kwechigadzirwa nekusimudzira Funga nezvehunhu sekurarama kwebhizimusi. Dombo repakona rekusimudzira uye kiyi yegoridhe.
Ini ndinotenda kuti chero bedzi isu tichigara tichiomerera kune yemakambani tsika, Lianteng inozokwanisa kugadzira irinyore kurongedza michini iwe, uye kuunza akawanda akakwana masevhisi kune vatengi vedu.